तपाईको शरीर आराम छ कि बिरामी ? जिब्रोबाट थाहा हुन्छ:हेर्नुहोस कसरी । जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
तपाईको शरीर आराम छ कि बिरामी ? जिब्रोबाट थाहा हुन्छ:हेर्नुहोस कसरी । जानी राखौ
Published :9February, 2019 6:48 pm
तपाईंको शरीरमा कुन किसिमको समस्या छ ? पहिचान गर्न जिब्रो पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ । जिब्रोको रंगले तपाईंको रोगको पहिचान गर्छ ।